Ọkachamara Semalt: Ụdị Okpokoro Ụdị na E Si Mee Ka Ha Dị Mma Maka SEO dị mma
Otu n'ime ihe kachasị mma (search engine optimization) bụ iji ihe edere. Mgbe ejiri ya mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ihe mgbakwunye nwere ike ịme ka ogo saịtị dị elu search engine peeji nke nsonaazụ (SERPs).
Nye ndị na-amaghị nke ọma isiokwu a, Andrew Dyhan, Semalt Onye ahịa Success Manager, na-akọwa na ederede arịlịka na-ezo aka na odide ma ọ bụ ederede na hyperlink. Ọtụtụ mgbe, ihe odide / ederede dị n'ụdị dị iche site na ọdịnaya ndị ọzọ ma na-akọwa mgbe ụfọdụ. Mgbe onye ọrụ clicks na edere arịlịka, a kpọga ya gaa ebe ọzọ. Ị nwere ike ịmepụta arịlịka ndị a site na iji HTML ma ọ bụ CSS.
Ntak emi mme ukpepn̄kpọ ikpọ akpan n̄kpọ ke SEO?
Ọ ga-abụ na ihe edere ederede agaghị adị ka ewu ewu dị ka ha dị taa ma ọ bụrụ na ha ejighị ha mee ihe maka azụlinks. Ha na-arụ nnukwu ọrụ n'iji backlinks (ihe dị mkpa SEO ogo). Tụkwasị na nke ahụ, engines ọchụchọ na-eji ha eme ihe iji webata weebụsaịtị maka nyochacha oke na spamming. Nke a bụ ya mere ọ dị oké mkpa maka ndị ọkachamara SEO ka ha ghọta n'ụzọ doro anya otú e si eji ihe arịlịka eme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Akwụkwọ ederede na-aba uru nye ndị na-agụ akwụkwọ dịka ọ na-enye ha echiche nke ọdịnaya ha kwesịrị ịtụ anya ịchọta na ntinye njem nke njikọ ahụ.
Ụdị Anchor Text
E nwere ọtụtụ ọdịiche nke ederede arịlịka. Ndị ọkachamara SEO nwere ike iji otu ma ọ bụ nchikota nke ọdịiche dị iche iche iji bulie ọdịnaya ha:
arịlịka echebara: Ndị ọkachamara n'ahịa ahịa na-etinye aka na njikọ ụlọ njikọ mepụta ihe odide arịlịka na isiokwu ndị kwekọrọ na mkpokọta nke ibe weebụ ma ọ bụ akwụkwọ ha na-ezubere iche. N'okwu ndị ọzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ijikọta na saịtị nwere ọdịnaya banyere 'ntụgharị nchịkọta ụlọ', ị jiri otu okwu ahịrịokwu a na hyperlinks gị.
Ntọala arịlịka ọsọ ọsọ: ndị a bụ njikọ clickable nke na-eduga gị na ihe onwunwe nwere ike ịbụ enyemaka. Ihe nnọchianya nke anchor anchor gụnyere "nweta ozi ndị ọzọ ebe a", "pịa ebe a maka ọnụego free", "nweta ebe ntanye n'efu gị" na ihe ndị ọzọ.
arịlịka akara: arịlịka ejiri jiri akara aha nke azụmahịa ahụ dị ka ederede. A na-ewere ha dị ka ụdị arịlịka kachasị nchebe iji jiri. Ọ bụ ya mere nnukwu ụdị dị ka Amazon ga-eji dịka ọtụtụ ederede a na-akpọ arịlịka dị ka o kwere mee n'ime ihe ha nwere dịka enwere ike inwe ihe kachasị mma.
Njikwa kachasị mma bụ iji otu ihe arịlịka ahụ na ibe ma ọ bụ ọdịdị nke otu ederede ahụ na ọtụtụ peeji nke ibe weebụ. Ọ nwere ike ibute penalization site na search engines dị ka peeji nke a hụrụ dị ka spammy ma ọ bụghị enyi-enyi. Ya mere, a ghaghị izere njikarịcha oke.
Njigide njikọ njikọta: Ndị a bụ ihe odide arịlịka nke jiri URL nke saịtị iji jikọta ya. Ha dị mfe iji ma ọ dị mkpa ka a kesaa ha n'ime ọdịnaya ahụ. Igwe njigide nke anchors njikọ ejiri ghara itu 15%.
Foto na 'alt' tag dị ka arịlịka: Ojiji nke ihe oyiyi na mkpokọta weebụ dị ukwuu taa. Ọ na-enyere aka iwelie mmekọrịta nke onye ọrụ ahụ na ọdịnaya. Mgbe ị na-eji ihe oyiyi dịka njikọ na ebe ọzọ, ị na-enyekwa akara 'alt' dị mkpa maka onyinyo ahụ. Ngwongwo ọchụchọ na-agụ tag nke 'alt' dị ka ederede arịlịka.
Ntọala LSI (Latent Semantic Indexing): LSI pụtara nanị iji synonyms (ọ bụchaghị nkwupụta zuru oke) nke isiokwu bụ isi. Ha bụ ihe dị iche iche nke isiokwu ahụ. Ntọala LSI na-enye aka ma ọ bụrụ na ịchọghị iji okwu ahụ kpọmkwem na njikọ gị.
Ngbanwe ọzọ nke ihe nkpọchi nke a na-ewere dịka nchekwa ma dị irè bụ njikọta akara na mkpịsị isiokwu. Na nke a, ị mepụtara hyperlinks na aha aha gị na isiokwu nke nhọrọ gị. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike iji "aha aha gị" rụọ ọrụ nhichapụ dịka ihe ntinye akwụkwọ mkpịsị aka gị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ihe kachasị mma site n'ihe odide arịlịka, jide n'aka na ị na-eji ha eche echiche. A ghaghị ekesa ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị na njupụta ziri ezi. Ha kwesịkwara ịbụ ndị dị nkenke ma dị mkpa maka ọdịnaya dị na ma jikọta na icheta ibe. Ụdị arịlịka Spammy bụ tiketi kpọmkwem iji penalization dị ka ndị ahụ bụ arịlịka ndị na-adịghị ada ụda n'ime ederede. Ejila ihe odide arịlịka dị otú ahụ n'ime ọdịnaya gị dịka ha ga-emerụ gị SEO.